बप्तिस्मा - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
हाम्रो बारे > WKG लाई विश्वास गर्नुहोस् > बप्तिस्मा
बप्तिस्मा - सुसमाचारको प्रतीक
अनुष्ठानहरू पुरानो नियमको पूजाको प्रमुख भाग थिए। त्यहाँ वार्षिक, मासिक र दैनिक अनुष्ठानहरू थिए। मृत्युको क्रममा र रीतिथितिहरू थिए, बलिहरू, सफा गर्ने र घुसाउने विधिहरू थिए। विश्वास समावेश थियो, तर यो प्रमुख थिएन।
यसको विपरित, नयाँ नियममा दुईटा आधारभूत रीतिथितिहरू छन्: बप्‍तिस्मा र संस्कार - र दुबैका लागि त्यहाँ कसरी लिने भन्ने बारेमा विस्तृत निर्देशनहरू छैनन्।
किन यी दुई? तपाईको धर्म किन कुनै पनि रीतिथितिहरुमा हुनुपर्दछ जुन विश्वास सर्वोपरि छ?
मलाई लाग्छ यसको मुख्य कारण प्रभुको भोज र बप्तिस्मा दुबै येशूको सुसमाचारको प्रतीक हो। तिनीहरूले हाम्रो विश्वासको मौलिक तत्त्वहरूलाई दोहोर्याउँछन्। यो कसरी बप्तिस्मामा लागू हुन्छ हेरौं।
येशू बप्तिस्माको विधिका आविष्कारक हुनुहुन्न। यो यहूदी धर्ममै विकसित भयो र बप्तिस्मा दिने जोनले पश्चातापलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विधिको रूपमा प्रयोग गरे, पानीले शुद्धिकरणको प्रतीकको साथ। येशूले यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुभयो र उनको मृत्यु र पुनरुत्थान पछि, चेलाहरूले यसलाई प्रयोग गर्न छोडे। यसले हाम्रो जीवनको लागि नयाँ जग र परमेश्वरसँगको सम्बन्धको लागि नयाँ आधार छ भन्ने तथ्यलाई नाटकीय रूपमा वर्णन गर्दछ।
किनकि हामीले क्षमा पायौं र ख्रीष्टको मृत्युले शुद्ध पारिएको हुनाले, पावलले महसुस गरे कि बप्तिस्मा भनेको उसको मृत्यु हो र उसको मृत्युमा हाम्रो सहभागिता हो। येशूको पुनरुत्थानसँगको सम्बन्ध जोड्न पावल पनि प्रेरित थिए। जब हामी बप्तिस्माको पानीबाट माथि उक्लन्छौं, हामी पुनरुत्थानलाई नयाँ जीवनको प्रतीक दिन्छौं - ख्रीष्टमा जीवन, हामीमा बाँचिरहेका छौं।
एउटा निकायमा बप्तिस्मा लिइयो
बप्‍तिस्मा मूलतः एउटा रीति हो कि यसले यो अभिव्यक्त गर्दछ कि कसैले उनीहरूको पापहरूको लागि पश्चाताप गरिसकेको छ, उसले ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरिसकेको छ र आध्यात्मिक तवरमा बढ्न थालेको छ - कि ऊ वास्तवमै एक जना इसाई हो। बप्तिस्मा सामान्यतया गरिन्छ जब कसैले प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ, तर यो कहिलेकाँही पछि गर्न सकिन्छ।
कसैले ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि उनी बप्तिस्माको लागि प्रश्नमा पर्दछन्। यो हुनसक्छ यदि व्यक्ति पर्याप्त बुढो छ वा धेरै जवान छ। एक जवान व्यक्तिले आफ्नो विश्वास पुरानो भन्दा भिन्न व्यक्त गर्न सक्दछ, तर जवान व्यक्तिहरू अझै विश्वास गर्न सक्छन्।
के तिनीहरूमध्ये कोहीले सम्भवतः आफ्नो सोच बदल्न सक्छन् र फेरि विश्वासबाट अलग हुन सक्छन्? हुनसक्छ, तर यो वयस्क विश्वासीहरूलाई पनि हुन सक्छ। के यसले बाल्टिनका केही रूपान्तरणहरू वास्तविक थिएनन् भनेर फेर्नेछ? हुनसक्छ, तर त्यो वयस्कहरूलाई पनि हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले पश्चाताप गर्छ र पाष्टरले न्याय गर्न सक्ने उति नै ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ भने उसले बप्तिस्मा लिन सक्छ। यद्यपि, नाबालिगहरूलाई उनीहरूका आमाबुवा वा कानुनी अभिभावकहरूको स्वीकृति बिना बप्तिस्मा लिनु हाम्रो अभ्यास होइन। यदि नाबालिगका बाबुआमा बप्तीस्माको बिरूद्ध छन् भने, येशूमा विश्वास गर्ने बच्चा कम इसाई हुँदैन किनकि ऊ वा उनी बप्तिस्मा नलिउन्जेल कुर्नु पर्छ।
विश्वव्यापी चर्च अफ भगवानमा डुबाएर बप्तिस्मा लिनु हाम्रो अभ्यास हो। हामी यो विश्वास गर्दछौं कि यो सम्भवतः प्रथम शताब्दीको यहूदी धर्म र शुरुको चर्चमा भएको थियो। हामी विश्वास गर्दछौं कि कुल विसर्जन मृत्यु र दफनका लागि प्रतीकात्मक छ कि छर्ने भन्दा राम्रो। यद्यपि, हामी बप्तिस्मा विधिलाई मसीहीहरूको विभाजन गर्न विवादास्पद मुद्दा बनाउँदैनौं।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि उसले पापको पुरानो जीवनलाई छोड्छ र ख्रीष्टलाई उसको प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्दछ। मृत्युको समानतालाई निरन्तरता दिन हामी भन्न सक्दछौं कि त्यो बूढा व्यक्ति ख्रीष्टसँगै मरे, शरीर राम्रोसँग गाडिएको थियो कि थिएन। सफाई प्रतीक थियो, अन्त्येष्टि देखाइएको छैन भने पनि। पुरानो जीवन मरिसकेको छ र नयाँ जीवन त्यहाँ छ।
शिशुहरू वा आफ्ना बच्चाहरूको बप्तिस्मा गर्न विश्वास नगर्ने बच्चाहरू बप्तिस्मा गर्नु हाम्रो अभ्यास होइन, किनकि हामी बप्तिस्मालाई विश्वासको अभिव्यक्तिको रूपमा देख्छौं, र आमा-बुबाको विश्वासले कसैलाई पनि मुक्ति दिलाउँदैन। जे होस्, हामी शिशु बप्तिस्माको अभ्यास गर्ने गैरमसीहीहरूको रूपमा निन्दा गर्दैनौं। मलाई शिशु बप्तिस्माको पक्षमा दुई सब भन्दा सामान्य तर्कहरूलाई संक्षिप्तमा हेरौं।
दोस्रो तर्क जुन कहिलेकाहीं शिशु बप्तिस्मालाई समर्थन गर्न प्रयोग गरिन्छ फ्रेट्सको अवधारणा हो। पुरानो नियममा बच्चाहरूलाई करारमा सामेल गरिएको थियो र करारमा प्रवेशको विधि भनेको शिशुहरूमा गरिएको खतना गर्नु थियो। नयाँ करार अझ राम्रो प्रतिज्ञाहरूसहितको एक उत्तम करार हो, त्यसैले बच्चाहरूलाई निश्चित रूपमा स्वचालित रूपमा समावेश गरिनुपर्दछ र नयाँ करारको परिचयात्मक संस्कारको लेबल लगाउनुपर्दछ, बप्तिस्मा, पहिले नै बाल्यावस्थामा। यद्यपि यो तर्कले पुरानो र नयाँ करार बिचको भिन्नतालाई मान्यता दिदैन। कोहीले वंशको आधारमा पुरानो करारमा प्रवेश गरे, तर कसैले पश्चाताप र विश्वास मार्फत मात्र नयाँ करार प्रविष्ट गर्न सक्दछन्। हामी विश्वास गर्दैनौं कि एक जना इसाईका सबै वंशहरू, तेस्रो र चौथो पुस्ता सम्म, स्वचालित रूपमा ख्रीष्टमा विश्वास हुनेछ! सबैले विश्वासमा आउनुपर्दछ।
बप्तिस्माको सही विधि र बप्तिस्माको युगमा विवाद शताब्दीयौंदेखि अस्तित्वमा छ, र यो तर्क मैले अघिल्ला केही अनुच्छेदहरूमा उल्लेख गरेको भन्दा बढी जटिल हुन सक्छ। यसबारे अझ धेरै कुरा भन्न सकिन्छ, तर यस बिन्दुमा यो आवश्यक छैन।
कहिलेकाहीं, शिशुको रूपमा बप्तिस्मा लिने व्यक्ति विश्वव्यापी चर्च अफ चर्चको सदस्य हुन चाहन्छ। के हामीलाई लाग्छ कि यो व्यक्तिलाई बप्तिस्मा दिनु आवश्यक छ? मेरो विचारमा यो ब्यक्तिको प्राथमिकता र बप्तिस्माको समझको आधारमा केस आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेछ। यदि उक्त व्यक्ति विश्वास र भक्तिको भरमा मात्र पुगेको छ भने, उक्त व्यक्तिलाई बप्तिस्मा गर्नु उचित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बप्तिस्माले उक्त व्यक्तिलाई विश्वासको महत्त्वपूर्ण कदम चालेको कुरा स्पष्ट पार्नेछ।
यदि व्यक्तिले शैशवकालमा बप्तिस्मा लिएको थियो र राम्रो फलफूलको साथ वयस्क इसाईको रूपमा वर्षौंसम्म बाँचिरहेको छ भने, त्यसोभए हामीले उसलाई बप्तिस्मा लिन हतार गर्नु पर्दैन। यदि तिनीहरूले यसको लागि सोध्छन्, हामी पक्कै पनि यो गर्न चाहन्छौं, तर हामीले इसाई फलहरू देखिन सक्ने दशकौं अघि गरिएको रीतिथितिहरूको बारेमा तर्क गर्नुपर्दैन। हामी केवल परमेश्वरको अनुग्रहको प्रशंसा गर्न सक्छौं। उक्त समारोह सही ढ Christian्गले सम्पन्न भयो कि भएन, व्यक्ति एक जना मसीही हो।
प्रभुको भोजमा सम्मिलित हुँदै
हामी विवरणहरूको बारेमा तर्क द्वारा विचलित हुनु हुँदैन। हाम्रो विश्‍वास र अभ्यास यो हो कि बप्तिस्मा लिनलाई पुरानो उमेर भएकाहरूलाई बप्तिस्मा गर्न डुब्न लगाएर। हामी पनि बिभिन्न विश्वास भएका मानिसहरूलाई परोपकारिता देखाउन चाहन्छौं। मलाई आशा छ कि यी कथनहरू केही हदसम्म हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न पर्याप्त छन्।
आउनुहोस्, प्रेषित पावलले हामीलाई दिएको अझ ठूलो तस्विरमा ध्यान केन्द्रित गरौं: बप्तिस्माले हाम्रो पुरानो व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ जुन ख्रीष्टसँगै मर्छ; हाम्रा पापहरू धोइएका छन् र हाम्रो नयाँ जीवन ख्रीष्ट र उहाँको चर्चमा बाँचिरहेका छन्। बप्‍तिस्मा पश्चात्ताप र विश्वासको अभिव्यक्ति हो - एउटा सम्झौटो हो कि हामी येशू ख्रीष्टको मृत्यु र जीवनले मुक्ति पाउँछौं। बप्‍तिस्माले सूक्ष्मको रूपमा सुसमाचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ - विश्वासको केन्द्रीय सत्यताहरू जुन व्यक्तिले हरेक पटक इसाई जीवन शुरू गरे त्यसबेला फेरि चित्रण गरिन्छ।